Jowhar.com - Somali news Leader - News: Banaan bax looga soo horjeedo Ciidamada Kenya oo maanta ka dhacay degmada Garbahaarey
December 12 2013 13:59:48
Banaan bax looga soo horjeedo Ciidamada Kenya oo maanta ka dhacay degmada Garbahaarey
Banaan bax ballaaran oo looga soo horjeedo ciidamada Kenya ee qeybta ka ah howl galka AMISOM ayaa maanta ka dhacay degmada Garbahaarey ee Gobolka Gedo, kaasoo ay ka qeyb galeen mas'uuliyiin ka tirsan Maamulka gobolka Gedo.
Dibad baxayaasha ayaa ku qeylinayay halku dhigyo ka dhan ah ciidamada kenya, iyagoo ku baaqayay in laga saaro magaalada Kismaayo iyo gebi ahaanba gobolada Jubooyinka.
Gudoomiyaha degmada Garbahaarey oo ka hadlay banaan baxa ayaa sheegay in dadweynaha reer Gedo ay cambaareynayaan xasuuqa ciidamada Kenya, isla markaana ay ka soo horjeedaan dhibaatada ay ku wado shacabka.
"Banaan baxa wuxuu ku saabsanaa dhibaatooyinka ciidamada Kenya, dadka dareenkooda ayay muujinayeen, runtiina aad baa uga xunahay dhibaatada ciidamada Kenya ay ku hayaan shacabkeena"ayuu yiri Gudoomiyaha Garbahaarey.
Banaan baxa ayaa waxaa lagu gubay calanka Kenya, waxaana uu ahaa kii ugu ballaarnaa ee mudooyinkan ka dhaca gobolka
Siyaasiyiinta iyo xubnaha dowladda Soomaaliya ayaa cambaareeyay xasuuq ay ka geysteen ciidamada Kenya, iyo dagaalkii ay ka qeyb qaateen oo ay kula safteen dhinac ka mid ah kooxaha magaalada Kismaayo ku dagaalamayay
master on July 02 2013
jowhar.com3,177,757 unique visits